Isimo sengqondo sesondo sivuselela ingqondo Umvuzo weZiseko
Ikhaya nokufunda Ukuziphatha ngokwesondo
Ixesha lokufikisa lixesha kuphuhliso lwethu xa iingqondo zethu zikulungele ukuba kwimeko yezesondo (okanye zilungiselelwe) ukulungiselela ukuba mdala. Loo meko inokwenzeka ngokunxibelelana namaqabane okwenyani obomi kunye / okanye ngokusebenzisana ne-intanethi yamanyala. Esi sifundo siya kuyakha ngokwenyani indlela ekhawulezayo yokuhamba ngokukhawuleza kwe-neural. Iya kubumba kwakhona ingqondo yethu kunye nesimo sethu sengqondo ngesini kunye nothando kwixesha elizayo. Konke oku kusekelwe kwinto esiyifundayo ngeli xesha libalulekileyo lokukhula. Kunokuba nzima ukushenxisa umkhwa owendele nzulu okwenziwe ngeli xesha kwinqanaba elizayo.
Ukuze i-intanethi ifikeleleke, i-adolescents iyakunqambela ukujonga i-porn kwiimagazini okanye kwi-DVD, eqhutywa yintliziyo ngokukhawuleza ixhamle ngesondo. Baya "bhinqa" ngamehlo ngoba loo nto yayingabantu abadala kuphela. Ngokuqhelekileyo yayifihliwe ngaphandle kwesooyihlo, abazalwana abadala okanye abagcini beevenkile. Baya kusebenzisa ngokucamngca ukucinga kwabo ngabadumileyo okanye amantombazana eklasini ukukhulula ukuxhatshazwa ngokwesondo. Njengoko baqala ukusebenzisana namanye amadoda namabhinqa amancinci, babeza kuhamba ngeendlela ezikhuselekayo zengqondo ekuhloliseni imizimba yomnye nomnye ekhokelela ekuthandaneni ngokwesondo ngexesha elithile.
Namhlanje uninzi lwabaselula 'baqala' imibuzo yabo yezesondo nge-hard-core porn ukubenza babe nemibono. Abaqali ngemifanekiso ethambileyo yesiseko sabasetyhini abanxibe ngokungakhathali ekufikeni. Ngaphezulu kwe-80% yezinto ezingamanyala ezibandakanya ubundlobongela obuphathelele kwezesini kwabasetyhini. Izinto ezibuhlungu, ezothusayo zikwabiza ngesondo ngakumbi kwingqondo yokufikisa kuba inombundu ophakamileyo wokonwaba kunomntwana okanye ingqondo yabantu abadala. Abantu banokubona izinto ezigqithileyo kwiseshoni enye kwii-smartphones zabo kunokuba ootatomkhulu babo bebone ebomini babo. Iziphumo zoku kusasazwa kwe-hard-core iphonografi kuphinda kubumbe ingqondo kunye nomsebenzi wayo.
Ubuchopho abukhiphi kwi-porn
Ubuchopho bethu abuzange bulungele ukujongana nale tsunami yezinto ezichithwayo eziye zafumaneka kule minyaka elishumi edlulileyo ngenxa yokufika kwe-intanethi ye-broadband. Iimpembelelo zempilo eziphambili ezichazwe ngabantu abancinci kunye nabaqeqeshi bezempilo: yixinzelelo; uxhala loluntu; ukwahlukana kwezentlalo; ingqondo yengqondo; Ukujonga ngokugqithiseleyo kwi-intanethi yezobugcisa nangona ziphumo ezimbi kunye neengxaki ze-erectile.
Yintoni ubuchopho ukuba buyenze xa kunokufikelela okungenamkhawulo kumvuzo oshukumisayo omkhulu ongazange uguquke? Ezinye iingqondo zilungelelanisa-kwaye kungekho ngendlela efanelekileyo. Inkqubo ihamba kancane. Ekuqaleni, ukusebenzisa i-porn kunye nokuhlaziya i-masturbating kwi-orgasm kugqiba ukuxhatshazwa ngokwesini kunye neirejistri njengenelisayo.
Kodwa ukuba siqhubeka sizinyamezela, ubuchopho bethu buqala ukusebenza kum. Ikhusela ngokwaso ngokugqithiseleyo kwedopamine ngokunciphisa ukuphendula kwayo kuyo, kwaye siziziva singaphantsi. Oku kunciphisa ububele kwi-dopamine bangela abanye abasebenzisi ukuba bafune ukufuna ukuvuselela, okwakhona, ukuqhuba utshintsho oluhlala njalo, ukuguqulwa ngokwenyama kwengqondo. Ba nobunzima ukubuyela.
Kutheni oko kufanelekile? Yintoni eyahlukileyo kwi-porn yexesha elidlulileyo?
<< Imemori nokuFunda Imifanekiso engamanyala kunye neTyala leSondo kwangoko >>